iPad တွင် ▷ Black Friday - ရောင်းချနေသော မော်ဒယ်များအားလုံး | အိုင်ဖုန်းသတင်း
Ignatius ခန်းမ | 27/11/2021 08:00 | အဆင့်မြှင့်တင် 27/11/2021 10:20 | အိုင်ပက်
အကယ်၍ သင်သည် အားလပ်ရက်များအတွင်း ဘတ်ဂျက်ကုန်သွားသောကြောင့် သင်၏ iPad အဟောင်းကို စက်တင်ဘာလတွင် သက်တမ်းမတိုးနိုင်ခဲ့ပါက၊ Black Friday သည် နှစ်သစ်အတွက် အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။အထူးသဖြင့် ယခုအခါ အတိုင်းအတာသည် ယခင်ကထက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာပါသည်။
ဒီနှစ် Black Friday သည် နိုဝင်ဘာလ 26 ရက်နေ့တွင် စတင်သည်။တနင်္လာနေ့ 22 ရက်နေ့မှ တနင်္လာနေ့ နိုဝင်ဘာလ 29 ရက်နေ့အထိဖြစ်သော်လည်း၊ သင်၏ iPad ကိုသက်တမ်းတိုးရန်သာမက သင်၏ iPhone၊ Mac၊ Apple Watch၊ AirPods တို့ကိုပါ သက်တမ်းတိုးရန် ကမ်းလှမ်းချက်အမျိုးမျိုးကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိမ့်မည်။
1 Black Friday မှာ ဘယ် iPad မော်ဒယ်တွေ ရောင်းမလဲ။
1.1 အိုင်ပက် Pro ကို 2021
1.2 အိုင်ပက် Pro ကို 2020
1.3 အိုင်ပက် Air လေကြောင်းလိုင်း
1.4 အိုင်ပက် 2021
1.5 iPad mini ကို 2021
2 Black Friday မှာ iPad ဝယ်ရတာ ဘာကြောင့် တန်ဖိုးရှိတာလဲ။
3 Black Friday မှာ iPad တွေ ဘယ်လောက်ကျလေ့ရှိလဲ။
4 Black Friday သည် iPad များတွင်မည်မျှကြာကြာခံသနည်း။
5 Black Friday တွင် iPad လျှော့စျေးများကို ဘယ်မှာရှာရမည်နည်း။
5.3 အယ်လ် Corte Ingles
5.4 K Tun
Black Friday မှာ ဘယ် iPad မော်ဒယ်တွေ ရောင်းမလဲ။
အိုင်ပက် Pro ကို 2021
၂၀၂၁ Apple iPad Pro
ဒီနှစ် မေလမှာ၊ Apple သည် iPad Pro အပိုင်းအခြား၊ စျေးကွက်တွင်ပိုမိုသောအင်္ဂါရပ်များပါရှိသော Apple iPad နှင့် MacBook Air တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်သောတူညီသောပရိုဆက်ဆာဖြင့်စီမံခန့်ခွဲသော Apple iPad ကိုသက်တမ်းတိုးခဲ့သည်။
၎င်း၏တင်ပြမှုအပြီး ၆ လကျော်သွားခဲ့ပြီး လအနည်းငယ်ကြာအောင် ကျွန်ုပ်တို့ ရှာဖွေနိုင်နေပြီဖြစ်သည်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကမ်းလှမ်းချက်များ 12,9 လက်မ နှင့် 11 လက်မ မော်ဒယ်နှစ်မျိုးလုံး။
Black Friday မှာ iPad Pro မော်ဒယ်နှစ်ခုလုံးက မပါဘူးဆိုတာ သေချာပါတယ်။ လျှော့စျေးပါတီကိုလွဲချော်လိမ့်မည်။
အိုင်ပက် Pro ကို 2020
iPad Pro 2020 သည် ဈေးကွက်တွင် တစ်နှစ်ခွဲကျော်သာရှိသေးသည်။ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်နေဆဲပါ။ မတတ်နိုင်၊ သို့မဟုတ် မလိုလားသော သုံးစွဲသူများအတွက် ယခုနှစ် မျိုးဆက်သစ်အတွက် ပေးချေရန်။
Amazon တွင် 2020 ခုနှစ်မှ iPad Pro မော်ဒယ်များ အထူးသဖြင့် 11-လက်မ မော်ဒယ်ကို ရှာတွေ့နိုင်သေးသည်။ အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောစျေးနှုန်းများဖြင့်။
2020-လက်မ iPad Pro 12,9 တွင် များစွာပါဝင်ခြင်းမရှိသော်လည်း ကုန်သည်များသည် Black Friday ကို အခွင့်ကောင်းယူမည်မှာ သေချာပါသည်။ ရနိုင်သောစတော့ရှယ်ယာများကိုဖယ်ရှားပါ။
2020 ခုနှစ် Apple iPad Air 10.9...
စျေးကွက်တွင် တစ်နှစ်ကျော်ကြာ 11 လက်မ iPad Pro ဒီဇိုင်းဖြင့် ခြေရာခံထားသည့် iPad Air သည် ယခုနှစ်တစ်လျှောက်လုံး လက်ခံရရှိထားသော တက်ဘလက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အထူးလျှော့စျေးထို့ကြောင့် သင်သည် Black Friday ကိုလက်လွတ်မည်မဟုတ်သည်မှာ သေချာသည်။
၂၀၂၀ Apple iPad (... မှ ...
နဝမမျိုးဆက် iPad သည် စျေးကွက်တွင်ရောက်ရှိနေသည်မှာ တစ်လကျော်သာရှိပြီဖြစ်သည်။ မည်သည့်ကမ်းလှမ်းမှုကိုမှရှာဖွေရန်မမျှော်လင့်ပါနှင့် iPad ထည့်သွင်းခြင်း။ ဒီမော်ဒယ်ရဲ့စျေးနှုန်းကို အနည်းငယ်လျှော့ချဖို့အတွက် လာမယ့်လအနည်းငယ်လောက် စောင့်ရပါလိမ့်မယ်။
iPad mini ကို 2021
2021 iPad mini ဖြင့် သင်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဒီဇိုင်းအပ်ဒိတ် အသုံးပြုသူ အများအပြားသည် စျေးနှုန်းမြင့်တက်မှုနှင့်အတူ စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြသည်။
နဝမမျိုးဆက် iPad ကဲ့သို့ ဤမော်ဒယ်သည် စျေးကွက်တွင် ရောင်းချခဲ့သည်မှာ တစ်လကျော်သာ ရှိသေးသည်။ သင့်ကိုယ်သင် မေ့သွားနိုင်ပါတယ်။ Black Friday တွင် လျှော့စျေးကို ရှာရန်။
Audible ရက် 30 အခမဲ့ စမ်းသုံးကြည့်ပါ။
Amazon Music ၏3လ အခမဲ့
Prime Video ကိုရက် ၃၀ အခမဲ့ကြိုးစားပါ
Black Friday မှာ iPad ဝယ်ရတာ ဘာကြောင့် တန်ဖိုးရှိတာလဲ။
အဲဒါ မပြောဘဲနဲ့ သွားတာ Black Friday သည် တစ်နှစ်တာ၏ အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ ခရစ္စမတ်ဈေးဝယ်ခြင်းသာမက အိမ်တွင်ရှိသော မည်သည့်အီလက်ထရွန်းနစ်စက်ပစ္စည်းကိုမဆို သက်တမ်းတိုးရန်လည်းဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီအားလုံးက ရကြတယ်။ ယခုနှစ်နောက်ဆုံးသုံးလပတ်တွင် ရောင်းရငွေအများစုBlack Friday သည် ကုန်ပစ္စည်းအားလုံး၏စျေးနှုန်းများ မြင့်တက်မှုကြောင့် ဝယ်ယူရန် အဆိုးရွားဆုံးအချိန်ဖြစ်သော်လည်း ခရစ္စမတ်နှင့်အတူ အရေးကြီးဆုံးနေ့များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
Black Friday မှာ iPad တွေ ဘယ်လောက်ကျလေ့ရှိလဲ။
2021-လက်မ iPad Pro 12,9 နှင့် 11-လက်မ မော်ဒယ် နှစ်မျိုးစလုံးကို အချို့စတိုးဆိုင်များတွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။ အများဆုံးလျှော့စျေး 10%တစ်ခါတစ်ရံတွင် 5% သာရှိနေသော်လည်း၊ သူတို့ကုန်ကျစရိတ်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းက သိသိသာသာ စုဆောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
2020 iPad Pro မော်ဒယ်သည် ၎င်း၏ဗားရှင်းနှစ်မျိုးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ ရှာဖွေနည်းကို ကောင်းစွာသိပါက အနည်းငယ်အထိ ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ လျှော့စျေး 15-17%စဉ်းစားရန် စိတ်ဝင်စားဖွယ် ရွေးချယ်မှုများ ဖြစ်လာသည်။
XNUMXth generation iPad နှင့် iPad mini နှစ်မျိုးလုံးသည် ဈေးကွက်တွင် တစ်လကျော်သာရှိသေးပြီး၊ ကြီးကြီးငယ်ငယ် လျှော့စျေးရှာဖို့ မမျှော်လင့်ပါနဲ့။. အဋ္ဌမမြောက် မျိုးဆက် iPad ကို 10-15% ကြား လျှော့ပေးဖွယ်ရှိသည်။
iPad Air သည် 2020 တွင် ဈေးကွက်ဝင်ခဲ့ပြီး လအတော်ကြာသည်အထိ ၎င်းကို Amazon တွင် တွေ့ရှိခဲ့သည်။ လျှော့စျေး ယူရို 100 ခန့် ထည့်သွင်းဗားရှင်းအတွက်။ ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့်၊ Black Friday အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လျှော့စျေးဖြင့် ၎င်းကို သင်တွေ့ရှိနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
Black Friday သည် iPad များတွင်မည်မျှကြာကြာခံသနည်း။
နှစ်စဉ်ကဲ့သို့ပင် Black Friday 2021 တွင်၊ Thanksgiving ပြီးနောက် နေ့တွင် ကျင်းပသည်။ အမေရိကန်မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဤနေ့သည် နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်ဖြစ်သည်။
တစ်ရက်အကြာတွင်၊ နိုဝင်ဘာလ 26Black Friday သည် 0:01 မှ 23:59 ထိ တရားဝင်စတင်မည့်အချိန်ဖြစ်သည်။
သို့သျောလညျး, ဒါကြောင့်အရှုပ်ဆုံးသောသူတို့သည်ယနေ့၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်လျှော့စျေးလက်လွတ်မခံကြစေရန်, တနင်္လာနေ့၊ နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်မှ နောက်တစ်နေ့ တနင်္လာနေ့၊ နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်အထိ (ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့) ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ်းလှမ်းချက်အမျိုးမျိုးကို ရှာဖွေသွားမည်ဖြစ်သည်။
Black Friday တွင် iPad လျှော့စျေးများကို ဘယ်မှာရှာရမည်နည်း။
Apple ပြီးပြီ။ black Friday နဲ့ အရူးကစားတယ်။ထို့ကြောင့် ကမ်းလှမ်းမှုတစ်မျိုးမျိုးကို ရှာဖွေရန် ၎င်းတို့၏စတိုးဆိုင်များ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏အွန်လိုင်းဝဘ်ဆိုဒ်သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် မမျှော်လင့်ပါနှင့်။
ဒီနေ့ကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး တခြားအရာတွေမှာ သုံးဖို့ အမြဲအဆင်ပြေမယ့် ပိုက်ဆံကို ချွေတာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ယုံကြည်ရပါမယ်။ အမေဇုံ, အယ်လ် Corte Ingles, နတ်သမီး, K Tun, ခမ်းနား...
Apple သည် Amazon သုံးစွဲသူများအားလုံး၊ ၎င်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အွန်လိုင်းစတိုးများမှတဆင့်၎င်းဖြန့်ဖြူးသောထုတ်ကုန်တစ်ခုစီတိုင်းကိုရရှိနိုင်သည်။ ကိစ္စအများစုတွင် စျေးနှုန်းချိုသာသည်။.
Apple သည် Amazon တွင်ရရှိနိုင်သော Apple ထုတ်ကုန်များ၏ catalog တစ်ခုလုံး၏နောက်ကွယ်တွင်ရှိနေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ခံစားသွားမည်ဖြစ်သည်။ တူညီသောအာမခံချက် Apple က တိုက်ရိုက်ဝယ်ရင် ရနိုင်တယ်။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း Mediamarkt Apple ထုတ်ကုန်များအပေါ် အကြီးအကျယ် လောင်းကြေးထပ်နေပါသည်။အထူးသဖြင့် Black Friday ကာလအတွင်း၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့ထုတ်ဝေသည့် ကမ်းလှမ်းချက်အားလုံးကို ကြည့်ရှုနေခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ မရပ်တန့်နိုင်ပါ။
၎င်း၏ဝဘ်ဆိုဒ်မှတစ်ဆင့် သို့မဟုတ် စပိန်တစ်ခွင်ရှိ မတူညီသောစင်တာတစ်ခုသို့ သွားရောက်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ El Corte Inglés သည်လည်း ပြင်ဆင်ထားမည်ဖြစ်သည်။ Black Friday ကာလအတွင်း စိတ်ဝင်စားစရာ လျှော့စျေးများ။
K-Tuin စတိုးက Apple ထုတ်ကုန်များတွင်သာ အထူးပြုသည်။Apple သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တည်ရှိမှု မရှိသော မြို့များတွင် တည်ရှိသော စတိုးဆိုင်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
Black Friday ဖြင့် ကမ်းလှမ်းသည်။ သိသိသာသာအထူးလျှော့စျေး သူတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်အားလုံးမှာ ပါတဲ့အတွက် ဒီနေ့အတောအတွင်းမှာ သူတို့ကို သွားကြည့်ရတာ မနာကျင်ပါဘူး။
Magnificos သည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း အင်တာနက်၏ K-Tuin ဖြစ်လာပြီး အဓိကအားဖြင့် အထူးပြုထားသည်။ Apple စက်ပစ္စည်းများအတွက် ထုတ်ကုန်များနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ.
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း Black Friday သည် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော လျှော့စျေးများနှင့် ကမ်းလှမ်းသည်။ ပရိုမိုးရှင်းကမ်းလှမ်းမှုများ ငါတို့သည် မလွတ်နိုင်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » အိုင်ပက် » black Friday ipad
Black Friday အိုင်ဖုန်း